Pa-O National Organization: မွနျမာနိုငျငံကလူတှေ ဘာကွောငျ့ အရပျပုလာပွီး သကျတမျးတိုလာရသနညျး ??
မွနျမာနိုငျငံကလူတှေ ဘာကွောငျ့ အရပျပုလာပွီး သကျတမျးတိုလာရသနညျး ??
တောငျကွီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ (၆)ရကျ
မညျသူမဆို မိမိကို အရပျပုသညျဟု ပွောလြှငျ စိတျထဲတှငျ ဝမျးနညျးသလိုလိုနှငျ့ စိတျဆိုးတတျကွသညျ။ မိမိတို့ကိုယျတိုငျသညျလညျး အရပျပုသညျကို အားမရကွ။ မလိုလားကွပေ။ ထို့ကွောငျ့ ဤဆောငျးပါး သညျ မွနျမာနိုငျငံ အတှငျးရှိ နထေိုငျကွသော အရပျပုညကျသူမြားကို ကဲ့ရဲ့ခွငျးမဟုတျ။ အဘယျ့ကွောငျ့ အရပျပုလာရသညျ့ အကွောငျးရငျးနှငျ့ အဘယျ့ကွောငျ့ သကျတမျးတိုရသညျ့အကွောငျးရငျးမြားကို လလေ့ာ မှတျသားထားသမြှ ဗဟုသုတကို ပွနျလညျ မြှဝခွေငျး သကျသကျသာဖွဈသညျ။
သို့သျောလညျး အရပျပုတိုငျး သကျတမျးမတိုပါ။ အရပျရှညျတိုငျးလညျး သကျတမျးမရှညျသူမြားကို တပုံတပငျ တှနေ့ရေပါသညျ။ အခြို့သော သူမြားသညျ မြိုးရိုးပုသောကွောငျ့ သားသမီးမြားလညျး မြိုးရိုးလိုကျပွီး အရပျပုသူမြားရှိသညျ။ တခြို့သူမြားမှာ အဖေ၊အမေ အရပျရှညျသလောကျ သားသမီးမြားက အရပျပုနကွေ သညျ။ ဤပွဿနာမှာ ယခုနောကျပိုငျး မွနျမာနိုငျငံတှငျ နရောတျောတျောမြားမြား တှမွေ့ငျနရေပါသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အရပျပုညကျလာသညျ့ ပွဿနာသာမက ရောဂါမြားလညျး စုံစိလာပွီး လူ့သကျတမျးလညျး တိုလာသညျ။ ယခငျ ဖကျဆဈဂပြနျလကျထကျတှငျ မွနျမာမြားသညျ ဂပြနျမြားကို ဂပြုဟုချေါခဲ့ကွသညျ။ မွနျမာမြား ဝဋျလညျနသေလား မသိ။ ယခုအခါ အာဆီယံနိုငျငံတှငျ ကမ်ဘောဒီးယား၊ ရှတေီ့မောပွီးလြှငျ မွနျမာက တတိယအပုဆုံး စာရငျးတှငျ ရောကျနသေညျ။
တဈဖကျတှငျ ရောဂါမြားလညျး စုံစိလာ၏။ အဖွဈမြားဆုံးသော ရောဂါမြားမှာ ကငျဆာ၊ သှေးတိုး၊ ဆီးခြိုနှငျ့ လဖွေတျခွငျး၊ ကိုယျတခွမျးသခွေငျး၊ အာရုံကွောထိခိုကျခွငျးမြားပငျဖွဈသညျ။ ယခုနောကျပိုငျးတှငျ နှလုံးသှေးကွောကဉျြး ရောဂါမြားလညျး အဖွဈမြားလာသညျကို သတိပွုမိလာသျာ။ ကမ်ဘာပျေါတှငျ ကငျဆာရောဂါအဖွဈမြားဆုံး (၁၀) နိုငျငံထဲတှငျ မွနျမာနိုငျငံပါဝငျနပေါသညျ။ ၂၀၁၄ သနျးခေါငျစာရငျးအရ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပမျြးမြှသကျတမျးမှာ ၆ဝနှငျ့ ရဝကွားတှငျသာ ရှိသညျဟု ဖျောပွထားပါသညျ။ အိမျနီးခငျြး နိုငျငံမြားနှငျ့ နှိုငျးယှဉျလြှငျ သကျတမျးအနိမျ့ဆုံး နိုငျငံစာရငျးတှငျ ပါဝငျသော အိန်ဒိယ၊ လာအို၊ အရှတေီ့မော နိုငျငံထကျ သကျတမျးအနညျးငယျသာပိုနသေညျဟု သိရသညျ။
ကြှနျှပျတို့ ဘိုးဘှားဘဘေငျခတျေက လူသကျတမျး ရှညျသလောကျ ယနကြေှ့နျတျောတို့ခတျေ အဘယျ့ကွောငျ့ လူသကျတမျးပိုတို လာရသနညျး။ အကြိုးရှိလြှငျ အကွောငျးရှိရမညျ။ ထိုအကွောငျးတရားမြားကို ရှာဖှနေိုငျမှသာလြှငျ အကြိုးတရားကို ထိနျးခြုပျနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။ အကွောငျးတရားမြားစှာရှိသညျ့အနကျ စာရေးသူအနဖွေငျ့ မိမိတို့နစေ့ဉျနှငျ့အမြှ စားသုံးနသေော အစားအစာအဟာရနှငျ့ စားသောကျမှုပုံစံကိုသာ ပွောပွခငျြပါသညျ။ ယခုအကွောငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ စားရေးဆရာ ခငျမောငျးစိုးက “ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဆငျးရဲသူတှကေ အဟာရပွညျ့မှီအောငျ မစားသောကျနိုငျကွသလို ခမျြးသာတဲ့သူလညျး ကနျြးမာရေးနှငျ့ ကိုကျညီအောငျ မစားသုံးနိုငျကွဘူး” ဟု မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကောကျခကျြခဖြူးပါသညျ။
ဟုတျပါသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အရှတေ့ောငျအာရှ အဆငျးရဲဆုံးနိုငျငံ (၁၀) နိုငျငံတှငျ နံပတျ(၈)နရော ၌ တညျရှိနပေါသညျ။ နိုငျငံဆငျးရဲသောကွောငျ့ ပွညျသူမြား ဝငျငှနေညျးပါးခွငျး၊ အသိပညာအားနညျးခွငျး တို့ကွောငျ့ ကနျြးမာရေးအသိပညာ နညျးပါးခဲ့သညျဟု မွငျမိပါသညျ။ ဆငျးရဲပွီး မတတျနိုငျသူမြားသညျ အစားအစာ(အသား၊ငါး) လုံလုံလောကျလောကျ မစားသုံးနိုငျသျောလညျး ခမျြးသာသူမြားသညျ အစားအစာကို စားသောကျဆိုငျမြားတှငျ နစေ့ဉျနှငျ့အမြှ အလှယျတကူ ဝယျစားနကွေသညျ။ ထိုဖွဈစဉျကွောငျ့ မွနျမာလူမြိုးမြားသညျ အရပျပုလာပွီး ရောဂါဝဒေနာမြား မြားမြားလာရသညျဟု မွငျမိပါသညျ။ ပုညှကျသော လူငယျကို အမြားအားဖွငျ့ မွို့ကွီးမြားတှငျ အတှမြေ့ားပါသညျ။ ထိုသူမြားသညျ မွို့ပွကွီးမြား၏ မသနျ့ရှငျးသောရေ မသနျ့ရှငျးသော အစားအစာမြားနှငျ့ နစေ့ဉျ ထိတှနေ့ရေသညျဟု မွငျမိပါသညျ။ တခြို့တိုငျးရငျးသား ဒသေမြားတှငျ မိဘမြားက မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲမှု မြားပွားလာခွငျး၊ ဝငျငှနေညျးပါးခွငျးတို့ကွောငျ့ မှေးဖှား လာသော ကလေးမြား၏ ကွီးထှားမှုကို ထိခိုကျစသေညျဟု မွငျမိပါသညျ။
တဈခြို့သော အရာမြားသညျ ယဉျကြေးမှုနှငျ့ ဆကျနှယျနသေောကွောငျ့ ရောဂါမြားဖွဈနိုငျစနေိုငျသညျဟု သိနသေညျ့တိုငျအောငျ ကြှနုပျတို့ မကျြကှယျပွုနသေညျ့ အရာမြားစှာ ရှိနပေါသညျ။ ဥပမာ - ဆနျသညျ ဘိုးဘှားဘဘေငျ ခတျေကတညျးက စားသုံးလာသညျဖွဈသောကွောငျ့ ထမငျးနှငျ့ဟငျးသညျ မွနျမာလူမြိုးတို့၏ ယဉျကြေးမှု အစားအစာပငျဖွဈနပေါသညျ။ သို့သျောလညျး ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့မှကွညျ့လြှငျ ကြှနုပျတို့ စားသုံးနသေော ထမငျးတှငျ ကယျလိုရီဓာတျမြားစှာ ပါဝငျပွီး လူကို သှေးတိုး၊ ဆီးခြို ရောဂါ ဖွဈစနေိုငျပွီး အဝလှနျရောဂါလညျး ဖွဈစနေိုငျပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကမ်ဘာပျေါတှငျ ဆနျထကျ ဂြုံ၊ ပဲမြားကို ပိုမိုစားသုံးလာသညျကို တှရေ့မညျ ဖွဈသညျ။ (ခြှငျးခကျြအနဖွေငျ့ ထမငျးကို စားသုံးသော တောငျသူလုပျသားမြားအနဖွေငျ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု အမွဲရှိသောကွောငျ့ ကယျလိုရီဓာတျမြားကို ပွနျလညျခပြေပေးသညျဟု မွငျမိပါသညျ)။ တဈဖကျတှငျ မွနျမာလူမြိုးတို့သညျ ဟငျးခြိုမှုနျ့၊ ကွကျသားမှုနျ့နှငျ့ စားသုံးဆီမြားကို အလှနျကွိုကျနှဈသကျပုံရသညျ။ ဟငျးခြိုမှုနျ့မပါလြှငျ မစားတတျ၊ ဆီနညျးလြှငျ မစားတတျသညျမှာ မွနျမာလူမြိုးတို့၏ ယဉျကြေးမှုတဈရပျပငျ ဖွဈလာသညျ။ အခြိုမှုနျ့စားသုံးခွငျးကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံသညျ ကငျဆာ၊ သှေးတိုး၊ ဆီးခြို ရောဂါ ထူထပျလာရသညျ။ ယခုနောကျပိုငျးတှငျ ပျေါသော ကွကျသားမှုနျ့တို့သညျ အခြိုမှုနျ့နှငျ့ တာရှညျခံမှိုသတျဆေးမြား၊ ဓာတုပစ်စညျးမြား ပါဝငျသောကွောငျ့ အခြိုမှုနျ့ထကျ အဆပေါငျးမြားစှာ ပိုမိုဆိုးရှားသညျဟု မွနျမာနိုငျငံစားသုံးသူကာကှယျရေးအသငျးက ထုတျပွနျထားပါသညျ။
မွနျမာလူမြိုးမြားကို ရောဂါထူ သကျတမျးတိုစသေညျ့ အခွားအဓိကအကွောငျးရငျးမှာ မသနျ့ရှငျးသော အစားအစာမြားပငျ ဖွဈသညျ။ မွနျမာနိုငျငံတှငျ မသနျ့ရှငျးသော အစားအစာမညျမြှပငျ ပွနျ့နှံ့နမေညျနညျး။ တှေးကွညျ့ရုံနှငျ့ သနေိုငျလောကျပါသညျ။ ကြှနုပျတို့နစေ့ဉျ စားသုံးနသေော အစားအစာသညျ ဓာတုပစ်စညျးမြား မပါရှိပါဟုမညျမြှ အာမခံခကျြရှိသနညျး။ ကြှနုပျတို့ စားသုံးနသေော ဆီသညျ အခွားသောဆီ တဈမြိုးမြိုးနှငျ့ မရောနှောပါဟုမညျမြှ သိနိုငျသနညျး။ တခြို့ဆီမြားဖွဈသညျ့ မသနျ့ရှငျးသောဆီမြား၊ အကွျောခံဆီမြား၊ ပွနျကွျောဆီမြားသညျ လူကို ကငျဆာရောဂါဖွဈနိုငျကွောငျး သိရသညျ။ ယခုအခါ မွနျမာလူမြိုးမြားသညျ ဆီကောငျးမကောငျးကို လလေ့ာသုံးသပျခြိနျပငျ မရှိတော့ဘဲ အလှယျတကူ ရရှိနသေောဆီမြားကိုသာ စားသုံးနကွေသညျ။ ထို့ကွောငျ့ တဈနတေ့ခွား ကငျဆာရသူမြား၊ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးသူမြား မြားလာ နရေသညျ့ အခကျြထဲတှငျ စားသုံးဆီ၏ အရညျအသှေး မပွညျ့မှီမှုနှငျ့ အလှနျအကြှံသုံးစှဲမှုမြားပငျ ဖွဈသညျ။
တဈဖကျ စားသုံးကုနျမြားတှငျလညျး သကျတမျးမပါသော အစားအစာ၊ အသားငါးမြား၊ မုနျ့မြား၊ သကျတမျးလှနျသော အစားစာမြား၊ မုနျ့မြား၊ ဓာတုပစ်စညျးမြားဖွငျ့ တာရှညျခံအောငျ အသုံးပွုထားသော အစားအစာမြားကို မသိကြိုးကြှံပွု စားသုံးနကွေခွငျး ဖွဈသညျ။ မွနျမာနိုငျငံရှိ စြေးတနျး၊ စြေးဆိုငျမြားတှငျ ရောငျးခနြသေော တရုတျနိုငျငံထုတျ အစားအစာမြားသညျ မြားသောအားဖွငျ့ တားမွဈဆေး၊ ဓာတုဆေး၊ ပိုးသတျစေး၊ ပါဝါသကွားမြားကို အလှနျအကြှံအသုံးပွုထားသညျဟု စားသုံးသူကာကှယျရေးအသငျးက ဆိုထားသညျ။ အကငျမြားတို့စားရနျ ပွုလုပျထားသော အခဉျြရညျမြား တှငျပါဝငျသော ငရုတျဆီ၊ ငရုတျခဉျြရညျမြားတှငျ ဆာလဖြူရဈအကျဆဈမြား သုံးထားသောကွောငျ့ အစာအိမျကို ထိခိုကျနိုငျပါသညျ။ အကျဆဈနှငျ့ ဆိုးဆေးမြားသညျ လဖွေတျခွငျး၊ ကိုယျတဈခွမျးသခွေငျး၊ အာရုံကွောထိခိုကျပကျြစီးခွငျးကို ဖွဈပျေါစကွေောငျ့ သိရပါသညျ။ ဤသို့ဆိုလြှငျ အဆိုပါ အစားအစာမြားကို မွနျမာလူမြိုးအနဖွေငျ့ နစေ့ဉျမညျမြှပငျ စားသုံးနပေါသနညျး။ တှေးကွညျ့လြှငျ စိတျမခမျြးသာပေ။
ဤကဲ့သို့သော လကျရှိမွနျမာနိုငျငံ၏ စားသောကျနထေိုငျမှု အခွအေနသေညျ မွနျမာလူမြိုးမြားကို ကနျြးမာရေးထိခိုကျစပွေီး သကျတမျးတိုလာအောငျ တှနျးပို့နသေညျဟု မွငျမိပါသညျ။ နိုငျငံတဈနိုငျငံ တိုးတကျရနျအတှကျ နိုငျငံအတှငျးရှိ နထေိုငျကွသော ပွညျသူပွညျသားမြား ကနျြးမာသနျစှမျးရနျ လိုအပျပါသညျ။ ကနျြးမာမှ အရာရာကို စှမျးဆောငျနိုငျမညျ။ ထို့ကွောငျ မွနျမာပွညျသူပွညျသားမြားအားလုံး ကနျြးမာသနျစှမျးသောဘဝမြားကို ပိုငျဆိုငျနိုငျရနျအတှကျ အစိုးရအနဖွေငျ့လညျး ထိနျးကှပျကွီးကွပျပေးရနျလိုအပျသကဲ့သို့ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ ကနျြးမာရေးအသိတရားဖွငျ့ ဆငျခွငျစားသောကျကွရနျ လိုအပျပါသညျ။ မွနျမာပွညျသူ ပွညျသားမြားအနဖွေငျ့ အခြိနျမလှနျခငျ အစားအစာမြားကို ဆငျဆငျခွငျခွငျ စားသုံးကွပွီး နိုငျငံအတှကျ အထောကျအကူပွုနိုငျသော ကနျြမားသနျစှမျးသညျ့ ပွညျသူမြား ဖွဈကွပါစလေိုကွောငျး ဆုတောငျးလကျြ ရေးသားတငျပွလိုကျပါသညျ။
မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေ ဘာကြောင့် အရပ်ပုလာပြီး သက်တမ်းတိုလာ ရသနည်း ??
တောင်ကြီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၆)ရက်
မည်သူမဆို မိမိကို အရပ်ပုသည်ဟု ပြောလျှင် စိတ်ထဲတွင် ဝမ်းနည်းသလိုလိုနှင့် စိတ်ဆိုးတတ်ကြသည်။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သည်လည်း အရပ်ပုသည်ကို အားမရကြ။ မလိုလားကြပေ။ ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါး သည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ နေထိုင်ကြသော အရပ်ပုညက်သူများကို ကဲ့ရဲ့ခြင်းမဟုတ်။ အဘယ့်ကြောင့် အရပ်ပုလာရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် အဘယ့်ကြောင့် သက်တမ်းတိုရသည့်အကြောင်းရင်းများကို လေ့လာ မှတ်သားထားသမျှ ဗဟုသုတကို ပြန်လည် မျှဝေခြင်း သက်သက်သာဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း အရပ်ပုတိုင်း သက်တမ်းမတိုပါ။ အရပ်ရှည်တိုင်းလည်း သက်တမ်းမရှည်သူများကို တပုံတပင် တွေ့နေရပါသည်။ အချို့သော သူများသည် မျိုးရိုးပုသောကြောင့် သားသမီးများလည်း မျိုးရိုးလိုက်ပြီး အရပ်ပုသူများရှိသည်။ တချို့သူများမှာ အဖေ၊အမေ အရပ်ရှည်သလောက် သားသမီးများက အရပ်ပုနေကြ သည်။ ဤပြဿနာမှာ ယခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေရာတော်တော်များများ တွေ့မြင်နေရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရပ်ပုညက်လာသည့် ပြဿနာသာမက ရောဂါများလည်း စုံစိလာပြီး လူ့သက်တမ်းလည်း တိုလာသည်။ ယခင် ဖက်ဆစ်ဂျပန်လက်ထက်တွင် မြန်မာများသည် ဂျပန်များကို ဂျပုဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာများ ဝဋ်လည်နေသလား မသိ။ ယခုအခါ အာဆီယံနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘောဒီးယား၊ ရှေ့တီမောပြီးလျှင် မြန်မာက တတိယအပုဆုံး စာရင်းတွင် ရောက်နေသည်။
တစ်ဖက်တွင် ရောဂါများလည်း စုံစိလာ၏။ အဖြစ်များဆုံးသော ရောဂါများမှာ ကင်ဆာ၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုနှင့် လေဖြတ်ခြင်း၊ ကိုယ်တခြမ်းသေခြင်း၊ အာရုံကြောထိခိုက်ခြင်းများပင်ဖြစ်သည်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါများလည်း အဖြစ်များလာသည်ကို သတိပြုမိလာသာ်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကင်ဆာရောဂါအဖြစ်များဆုံး (၁၀) နိုင်ငံထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေပါသည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်းမှာ ၆ဝနှင့် ရဝကြားတွင်သာ ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သက်တမ်းအနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံစာရင်းတွင် ပါဝင်သော အိန္ဒိယ၊ လာအို၊ အရှေ့တီမော နိုင်ငံထက် သက်တမ်းအနည်းငယ်သာပိုနေသည်ဟု သိရသည်။
ကျွန်ှပ်တို့ ဘိုးဘွားဘေဘင်ခေတ်က လူသက်တမ်း ရှည်သလောက် ယနေ့ကျွန်တော်တို့ခေတ် အဘယ့်ကြောင့် လူသက်တမ်းပိုတို လာရသနည်း။ အကျိုးရှိလျှင် အကြောင်းရှိရမည်။ ထိုအကြောင်းတရားများကို ရှာဖွေနိုင်မှသာလျှင် အကျိုးတရားကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းတရားများစွာရှိသည့်အနက် စာရေးသူအနေဖြင့် မိမိတို့နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စားသုံးနေသော အစားအစာအဟာရနှင့် စားသောက်မှုပုံစံကိုသာ ပြောပြချင်ပါသည်။ ယခုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စားရေးဆရာ ခင်မောင်းစိုးက “ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲသူတွေက အဟာရပြည့်မှီအောင် မစားသောက်နိုင်ကြသလို ချမ်းသာတဲ့သူလည်း ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုက်ညီအောင် မစားသုံးနိုင်ကြဘူး” ဟု မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ ကောက်ချက်ချဖူးပါသည်။
ဟုတ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရှေ့တောင်အာရှ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ (၁၀) နိုင်ငံတွင် နံပတ်(၈)နေရာ ၌ တည်ရှိနေပါသည်။ နိုင်ငံဆင်းရဲသောကြောင့် ပြည်သူများ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ အသိပညာအားနည်းခြင်း တို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးအသိပညာ နည်းပါးခဲ့သည်ဟု မြင်မိပါသည်။ ဆင်းရဲပြီး မတတ်နိုင်သူများသည် အစားအစာ(အသား၊ငါး) လုံလုံလောက်လောက် မစားသုံးနိုင်သော်လည်း ချမ်းသာသူများသည် အစားအစာကို စားသောက်ဆိုင်များတွင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အလွယ်တကူ ဝယ်စားနေကြသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် မြန်မာလူမျိုးများသည် အရပ်ပုလာပြီး ရောဂါဝေဒနာများ များများလာရသည်ဟု မြင်မိပါသည်။ ပုညှက်သော လူငယ်ကို အများအားဖြင့် မြို့ကြီးများတွင် အတွေ့များပါသည်။ ထိုသူများသည် မြို့ပြကြီးများ၏ မသန့်ရှင်းသောရေ မသန့်ရှင်းသော အစားအစာများနှင့် နေ့စဉ် ထိတွေ့နေရသည်ဟု မြင်မိပါသည်။ တချို့တိုင်းရင်းသား ဒေသများတွင် မိဘများက မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု များပြားလာခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် မွေးဖွား လာသော ကလေးများ၏ ကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်စေသည်ဟု မြင်မိပါသည်။
တစ်ချို့သော အရာများသည် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသောကြောင့် ရောဂါများဖြစ်နိုင်စေနိုင်သည်ဟု သိနေသည့်တိုင်အောင် ကျွနုပ်တို့ မျက်ကွယ်ပြုနေသည့် အရာများစွာ ရှိနေပါသည်။ ဥပမာ - ဆန်သည် ဘိုးဘွားဘေဘင် ခေတ်ကတည်းက စားသုံးလာသည်ဖြစ်သောကြောင့် ထမင်းနှင့်ဟင်းသည် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု အစားအစာပင်ဖြစ်နေပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ကျွနုပ်တို့ စားသုံးနေသော ထမင်းတွင် ကယ်လိုရီဓာတ်များစွာ ပါဝင်ပြီး လူကို သွေးတိုး၊ ဆီးချို ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အဝလွန်ရောဂါလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆန်ထက် ဂျုံ၊ ပဲများကို ပိုမိုစားသုံးလာသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ (ချွင်းချက်အနေဖြင့် ထမင်းကို စားသုံးသော တောင်သူလုပ်သားများအနေဖြင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အမြဲရှိသောကြောင့် ကယ်လိုရီဓာတ်များကို ပြန်လည်ချေပပေးသည်ဟု မြင်မိပါသည်)။ တစ်ဖက်တွင် မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ဟင်းချိုမှုန့်၊ ကြက်သားမှုန့်နှင့် စားသုံးဆီများကို အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ပုံရသည်။ ဟင်းချိုမှုန့်မပါလျှင် မစားတတ်၊ ဆီနည်းလျှင် မစားတတ်သည်မှာ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်လာသည်။ အချိုမှုန့်စားသုံးခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကင်ဆာ၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို ရောဂါ ထူထပ်လာရသည်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် ပေါ်သော ကြက်သားမှုန့်တို့သည် အချိုမှုန့်နှင့် တာရှည်ခံမှိုသတ်ဆေးများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ ပါဝင်သောကြောင့် အချိုမှုန့်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုဆိုးရွားသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းက ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
မြန်မာလူမျိုးများကို ရောဂါထူ သက်တမ်းတိုစေသည့် အခြားအဓိကအကြောင်းရင်းမှာ မသန့်ရှင်းသော အစားအစာများပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မသန့်ရှင်းသော အစားအစာမည်မျှပင် ပြန့်နှံ့နေမည်နည်း။ တွေးကြည့်ရုံနှင့် သေနိုင်လောက်ပါသည်။ ကျွနုပ်တို့နေ့စဉ် စားသုံးနေသော အစားအစာသည် ဓာတုပစ္စည်းများ မပါရှိပါဟုမည်မျှ အာမခံချက်ရှိသနည်း။ ကျွနုပ်တို့ စားသုံးနေသော ဆီသည် အခြားသောဆီ တစ်မျိုးမျိုးနှင့် မရောနှောပါဟုမည်မျှ သိနိုင်သနည်း။ တချို့ဆီများဖြစ်သည့် မသန့်ရှင်းသောဆီများ၊ အကြော်ခံဆီများ၊ ပြန်ကြော်ဆီများသည် လူကို ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ မြန်မာလူမျိုးများသည် ဆီကောင်းမကောင်းကို လေ့လာသုံးသပ်ချိန်ပင် မရှိတော့ဘဲ အလွယ်တကူ ရရှိနေသောဆီများကိုသာ စားသုံးနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်နေ့တခြား ကင်ဆာရသူများ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းသူများ များလာ နေရသည့် အချက်ထဲတွင် စားသုံးဆီ၏ အရည်အသွေး မပြည့်မှီမှုနှင့် အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုများပင် ဖြစ်သည်။
တစ်ဖက် စားသုံးကုန်များတွင်လည်း သက်တမ်းမပါသော အစားအစာ၊ အသားငါးများ၊ မုန့်များ၊ သက်တမ်းလွန်သော အစားစာများ၊ မုန့်များ၊ ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် တာရှည်ခံအောင် အသုံးပြုထားသော အစားအစာများကို မသိကျိုးကျွံပြု စားသုံးနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဈေးတန်း၊ ဈေးဆိုင်များတွင် ရောင်းချနေသော တရုတ်နိုင်ငံထုတ် အစားအစာများသည် များသောအားဖြင့် တားမြစ်ဆေး၊ ဓာတုဆေး၊ ပိုးသတ်စေး၊ ပါဝါသကြားများကို အလွန်အကျွံအသုံးပြုထားသည်ဟု စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းက ဆိုထားသည်။ အကင်များတို့စားရန် ပြုလုပ်ထားသော အချဉ်ရည်များ တွင်ပါဝင်သော ငရုတ်ဆီ၊ ငရုတ်ချဉ်ရည်များတွင် ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်များ သုံးထားသောကြောင့် အစာအိမ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ အက်ဆစ်နှင့် ဆိုးဆေးများသည် လေဖြတ်ခြင်း၊ ကိုယ်တစ်ခြမ်းသေခြင်း၊ အာရုံကြောထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင့် သိရပါသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် အဆိုပါ အစားအစာများကို မြန်မာလူမျိုးအနေဖြင့် နေ့စဉ်မည်မျှပင် စားသုံးနေပါသနည်း။ တွေးကြည့်လျှင် စိတ်မချမ်းသာပေ။
ဤကဲ့သို့သော လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ စားသောက်နေထိုင်မှု အခြေအနေသည် မြန်မာလူမျိုးများကို ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေပြီး သက်တမ်းတိုလာအောင် တွန်းပို့နေသည်ဟု မြင်မိပါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ တိုးတက်ရန်အတွက် နိုင်ငံအတွင်းရှိ နေထိုင်ကြသော ပြည်သူပြည်သားများ ကျန်းမာသန်စွမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျန်းမာမှ အရာရာကို စွမ်းဆောင်နိုင်မည်။ ထို့ကြောင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံး ကျန်းမာသန်စွမ်းသောဘဝများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရအနေဖြင့်လည်း ထိန်းကွပ်ကြီးကြပ်ပေးရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ ပြည်သူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးအသိတရားဖြင့် ဆင်ခြင်စားသောက်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများအနေဖြင့် အချိန်မလွန်ခင် အစားအစာများကို ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် စားသုံးကြပြီး နိုင်ငံအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်သော ကျန်မားသန်စွမ်းသည့် ပြည်သူများ ဖြစ်ကြပါစေလိုကြောင်း ဆုတောင်းလျက် ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါသည်။